ပြဿနာများကြီးထွားလာသကြား Crystal နှင့်အတူအကူအညီ
သကြား crystal ဟာအတူဒုက္ခပြသနာများသည်များအတွက်အကူအညီ
သကြား crystals သို့မဟုတ်ရော့ခ်သကြားလုံး (! သင်သည်ထိုသူတို့အစာကိုစားနိုင်ပါတယ်) ကြီးထွားဖို့အလုံခြုံဆုံး crystals ကြားတွင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြဲကြီးထွားဖို့အလွယ်ကူဆုံး crystals မရှိကြပေ။ သင်တစ်ဦးစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်နွေးသောရာသီဥတုတွင်နေထိုင်ပါကသင်သည်အမှုအရာကိုသွားရအနည်းငယ်အပိုအကွံဉာဏျလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ကြီးထွားလာသကြား crystals နှစ်ခုနည်းစနစ်ရှိပါသည်။ အသုံးအများဆုံးတအောင်ကပါဝင်ပတ်သက် ပြည့်နှက်သကြားဖြေရှင်းချက် သည်အရည်များတွင်ကြမ်းတမ်း string ကိုဆွဲထားနှင့် crystals string ကိုအပေါ်ဖွဲ့စည်းရန်စတင်ရှိရာအမှတ်ဖြေရှင်းချက်အာရုံစူးစိုက်ရေငွေ့ပျံများအတွက်စောင့်ဆိုင်း။
အဆိုပါပြည့်နှက်ဖြေရှင်းချက်ကကွန်တိန်နာ၏အောက်ဆုံးများတွင်စုပြုံပြီးတော့သင့်ရဲ့ကြည်လင်ကြီးထွားလာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အရည် (အောက်ခြေမှာမသကြား) ကို အသုံးပြု. မှစတင်သည်သည်အထိရေပူမှသကြားထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။ ဤနည်းလမ်းကိုတစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု၏သင်တန်းကျော် crystals ထုတ်လုပ်ရန်ကြတယ်။ လေထဲမှာရေငွေ့ပျံအလွန်နှေးကွေးသောသို့မဟုတ်သင်သကြားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်အောင်အပူချိန် (ကနေသာပြတင်းများကဲ့သို့) fluctuates ရှိရာတည်နေရာတစ်ခုထဲတွင်ကွန်တိန်နာနေရာရှိလျှင်ကြောင်းဒါကြောင့်စိုစွတ်သောဘယ်မှာသငျသညျနေရာမှာအသက်ရှင်လျှင်၎င်းသည်ပျက်ကွက်။
တစ်ဦးကြီးထွား အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင် ။
မျိုးစေ့ကြည်လင်ရရန်အခြားလမ်းရော့ခ်သကြားလုံးသို့မဟုတ်အခြားသကြားကြည်လင်နေတဲ့အပိုင်းအစထံမှတဦးတည်းကိုချွတ်ချိုးဖျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြို့သောနိုင်လွန်လိုင်း (သင်ရှိပါကကြမ်းတမ်းချည်ကိုမသုံးကြဘူးပေါ်သို့အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင်ချည်နှောင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ထုံးကိုသုံးပါ တဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင် ) ။ သငျသညျအဖြေအတွက်ကြည်လင်ရပ်ဆိုင်းထားသည့်အခါသင်ကလုံးဝဖုံးအုပ်သေးနှစ်ဖက်သို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာ၏အောက်ဆုံးထိမခံကြချင်တယ်။
သင့်ရဲ့ကျောက်သလင်းဖြေရှင်းချက် Supersaturate ။
သငျသညျဖြေရှင်းချက်သို့ပျော်ဖို့တတ်နိုင်သမျှသကြားလိုပါတယ်။ အပူချိန်တိုးပွားလာသိသိသာသာပျော်လိမ့်မည်ဟုသကြားဓာတ်ပမာဏကိုတိုးပွါး, ဒါကြောင့်သင်ဥပမာပူကိုထိပုတ်ပါရေအတွက်ထက်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောသို့အများကြီးပိုသကြားရနိုင်တယ်။ ရေကိုပြုတ်နှင့်ပျော်ပါလိမ့်မယ်ထက်ပိုပြီးသကြားအတွက်နှိုးဆော်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမ undissolved သကြားဟာကြည်လင်၌တည်သေချာစေရန်တစ်ဦးကကော်ဖီ filter ကိုမှတဆင့်ဖြေရှင်းချက်သွန်းလောင်းရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆရဲ့ ကြီးထွားလာဖြေရှင်းချက် ။ သငျသညျအဖြစ်-သို့မဟုတ်သင် crystals ကွန်တိန်နာအပေါ်ဖွဲ့စည်းရန်စတင်တွေ့မြင်တိုင်အောင်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက်အငွေ့ပျံကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်အရည်အချို့ကိုပယ်အငွေ့ပျံဖို့ရွေးချယ်ပါက reheat နှင့်အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင်မိတ်ဆက်ရှေ့မှာ filter ။
ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေရှင်းချက် Cool ။
အပူချိန်မှဆူထံမှကျရောက်အဖြစ်သကြားအများကြီးလျော့နည်းပျော်ဝင်ဖြစ်လာသည် အခန်းအပူချိန် သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်။ သငျသညျအမြန်ကြည်လင်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလှုံ့ဆော်ရန်ဤဝိသေသကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါ '' လှည့်ကွက် '' တစ်သကြားဖြေရှင်းချက်ကိုအလွန်လျင်မြန်စွာအေးလျှင် supersaturated ဖြစ်လာလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြေရှင်းချက်တဖြည်းဖြည်းအအေးခွင့်ပြုပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်လျင်မြန်စွာအအေးကြောင်းဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ဘဲကြီးထွား crystals ထက်အလွန်အမင်းစုစည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ သငျသညျအနီး-ဆူရေတစ်အိုးအတွင်းမှမြေတပြင်လုံးကြည်လင်ကြီးထွားလာကွန်တိန်နာ setting ဖြင့်သင့်ဖြေရှင်းချက်၏အအေးနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ရေမရှိသောဒါမှမဟုတ်တခြားဟာကြည်လင်ကွန်တိန်နာ၏နှစ်ဖက်ရေအထဲမှာမရလိမျ့မညျဟုအလုံအလောရှည်များမှာသေချာအောင်ရရှိသွားတဲ့နိုင်အောင်ကြည်လင်ကြီးထွားလာကွန်တိန်နာတံဆိပ်ခတ်ထားလော့ဖြစ်စေ။ မြေတပြင်လုံး setup ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအခန်းအပူချိန်ဆင်း drop ကြပါစို့။ သငျသညျနာရီစုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းကြီးထွားတွေ့မြင်စေခြင်းငှါ, စဉ်ကမြင်နိုင်ဖို့ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်ကြာနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်သကြား crystals ဖြည်းဖြည်းမပေါက်ပါဘူး။ ဖြေရှင်းချက်ဖြည်းဖြည်းအခန်းအပူချိန်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်ပြီးတာနဲ့သင် (ကွန်တိန်နာအတွင်းမှ fit ပါလိမ့်မယ်လျှင်) ရေခဲသေတ္တာ၏အပူချိန်ကချပြီးလျှင်ဆက်လက်နိုင်ဘူး။
သင်တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်အတွက်အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင်ရပ်ဆိုင်းလိုလျှင် ပြည့်နှက်ဖြေရှင်းချက် , သင်ဖြေရှင်းချက်၏အအေးကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်နာရီအနည်းငယ်ကျော်ကြည်လင်ကြီးထွားရပေမည်။
ထို့ကြောင့်, သင်သကြား crystals ကြီးထွားလာများအတွက်ရေငွေ့ပျံနည်းလမ်းကိုသုံးနိုငျရှိရာနေရာမှာအသက်ရှင်နေထိုင်လျှင်ပင်, သင်သည်ဤနည်းလမ်းတစ်သွားလာရင်းပေးချင်ပေမည်။
လမ်းညွှန်ပူဖောင်းကြော် - ထိုးနှက်ဒါကဘောင်း Bubbles
အိမ်လုပ်ရှလကာ Make လုပ်နည်း
တစ်ဦးကို Reverse လာကြတယ်ပစ်ရန်ကဘယ်လို
ရောမမြို့၏ရှေးစီးတီးအတော်များများ NICKNAME ရှိထားသည်
Poh အဓိပ္ပာယ် (ဓာတုဗေဒ)
Marian Anderson က Quotes
အားလုံးအချိန်ထိပ်တန်း 10 ရုပ်ပြစာအုပ်စူပါ villain
သင်ကသင့်ရဲ့မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာချက်ပြုတ်နိုင်သလား 25 အရာ
ဂျပန်မှာ "ချစ်စရာ" ဟုပြောပါနှင့်ရေးထားလုပ်နည်း
ကလေးများအဘို့အစန္ဒယား Method ကိုစာအုပ်များ - အသက်7နှင့် Up ကို
"ဒီ Little က Matchstick မိန်းကလေး"
ရှကျလှေ rudder များ၏အမျိုးအစားများ
သင့်ရဲ့ကားလွန်း Rough Idling သလဲ?
ဆစ်ခ်သမိုင်း၏ Shaheed Singh ကအာဇာနည်နေ့
Rove ပိုး, မိသားစု Staphylinidae